Aferam-pasipaorom-bakisiny sandoka tratra tao Armenia · Global Voices teny Malagasy
Mpiasan'ny fahasalamana enina migadra noho ny fizarana taratasim-bakisiny sandoka
Voadika ny 18 Oktobra 2021 7:47 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, عربي, русский, Português, English
Toeram-panaovana vaksiny ao Yerevan. Sary: Robin Fabbro/OC Media.
Navoaka voalohany tao amin'ny OC Media ity lahatsoratra nosoratan'i Ani Avetisyan ity. Navoaka eto indray ny dika nasiam-panovana noho ny fifanaraham-piarahamiasa momba ny votoaty.
Mpiasan'ny fahalasalamana enina no voatazona ao amin'ny foibem-pitsaboam-pianakaviana Gyumri ao amin'ny faritany Shirak ao Armenia tamin'ny 13 Oktobra rehefa avy nanambara ireo mpanao famotorana fa nizara sertifikà sandoka momba ny vaksiny ilay toerana. Araka ny tatitra ofisialy, namoaka taratasy sandoka ireo mpiasa ho takalon'ny kolikoly mitentina 5.000 hatramin'ny 10.000 dram Armeniana (10–20 dolara Amerikana).
Tombanan'ireo manampahefana fa olona maherin'ny 700 no nividy ireo taratasy sandoka fanamarinana vaksiny tao Gyumri — tanàna faharoa lehibe indrindra ao Armenia.
Omalin'io, nitatitra ny Sampan-draharahan'ny Fiarovam-pirenena fa nisambotra mpanampy mpitsabo iray tao amin'ny toeram-pitsaboana iray tao an-tanànan'i Yeranos, ao amin'ny faritanin'i Gegharkunik izy ireo noho ny fizarana taratasy fanamarinana vaksiny sandoka tamin'ireo mponina teo an-toerana.
Niseho ny fisamborana fotoana fohy nilazan'ny praiminisitra Nikol Pashinyan ny tsy fahafaham-pony tamin'ny taha ambany amin'ny fanaovana vaksiny ao amin'ny firenena. Nandritra ny fivorian'ny governemanta tamin'ny 7 Oktobra lasa teo, nanambara i Pashinyan fa nanome “andraikitra” ho an'ny biraom-panjakana izy: “mandehana vahao izany.”
Niantso manokana ny sampana mpitandro ny filaminana izy mba hanenjika ireo antontan-taratasy vaksiny sandoka.
“Ho an'ny Sampan-draharahan'ny Fiarovam-pirenena sy ny Polisy: tsy te handre momba ny vaksiny sandoka intsony aho. Sambory ireo,” hoy izy.
Tany Yerevan ny hany nisy fisamborana toy izany talohan'ny toromarik'i Pashinyan, raha nisy dokotera voalaza fa namoaka pasipaoro vaksiny sandoka ho takalon'ny vola.
Niseho ny olana momba ny taratasy fanamarinana vaksiny sandoka taorian'ny fanaovam-bakisiny sy fitiliana PCR isaky ny roa volana andoavam-bola izay lasa tsy maintsy atao ho an'ireo mpiasa marobe ao amin'ny firenena.
Nanambara ny Minisiteran'ny Fahasalamana tamin'ny Alakamisy fa tsy maintsy takiana ny taratasy fanamarinana fanaovam-baksiny na fitiliana PCR rehefa miditra amin'ny toeram-pisotroana kafe, trano fisakafoana ary toeram-bahoaka hafa.
Ao anatin'ny fitomboan-tranga COVID-19 isan'andro sy ny salan'isa 20 isan'andro maty, manodidina ny 6 isanjaton'ny mponina ao amin'ny firenena ihany no vita vaksiny feno. Manodidina ny 500.000 eo ny isan'ny olona nahazo ny fatra iray farafaharatsiny, izay eo amin'ny 12 isanjaton'ny mponina.